Filtrer les éléments par date : samedi, 20 juin 2020
samedi, 20 juin 2020 22:44
Malagasy tavela tany ivelany: Nisy 130 tonga teny Ivato androany avy atsy Maorisy
Teratany Malagasy miisa 130, ampahany amin’ireo tsy tafaverina teto Madagasikara talohan’ny 19 marsa 2020, nikatonan’ny sisintany sy niatoan’ireo sidina iraisam-pirenena, no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato Antananarivo, ity sabotsy 20 jona 2020 ity.
Niainga avy atsy amin’ny nosy Maorisy izy ireo, ary sidina an’ny kaompania Air Mauritius no nitondra azy ireo ho aty Antananarivo.
Efa vita fitiliana Covid-19 izy ireo nialoha ny niaingana tatsy Maorisy.
Nisy fakana hafanana tsirairay azy ireo teo ampidinana ny fiaramanidina. Natao fitiliana TDR ihany koa ary nameno taratasy fanekena fa hanaja fihibohana.
Nofendrahana fanafody mamono otrikaretina ihany koa ny entan’izy ireo niarahana tamin’ny miaramilan’ny CPC (Corps de Protection Civile).
samedi, 20 juin 2020 22:38
Anosivavaka Ambohimanarina: Mampiahiahy ny mponina ny fisiana faty misesy tato ho ato
Faty miisa valo ato anatin’ny telo andro misesy. Misy mpivady amin’ireo namoy ny ainy, nielanelana adim-pamantaranandro. Misy amin’ireo no maty tao an-trano ihany. Tokantrano efatra idonam-pahoriana no mifandimby novangian’ny Fokontany amin’ny fehim-pihavanana androany.
Tsy mpiseho tato Anosivavaka, Boriborintany fahaenina Ambohimanarina, Antananarivo ny tranga toy izany, ary raha nisy aza taloha dia roa no vangian’ny Fokontany ao anatin’ny andro iray, hoy ny fanamarihana nataon’ny ray aman-dreny iray ao an-toerana mikasika izany.
Miantso ny fitondram-panjakana, indrindra ny misahana ny fahasalamam-bahoaka ny mponina mba hijery akaiky ka hanome vaovao mba hampitony saina, noho izao tranga izao miseho ato anatin’ny vanim-potoana mampisy ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara.
samedi, 20 juin 2020 19:59
Adiadin’ny mpiray tampo: Niditra an-tsehatra ny miaramila, nitifitra ka tovolahy iray maty
Tovolahy iray manodidina ny 20 taona no namoy ny ainy, notifirin’ny miaramila tao Bekopaka-Antsalova omaly. Nifamaly noho fahaverezana « Clé USB » ireto tovolahy mpirahalahy iray tampo, ary niitatra ho ady totohondry izany.
Tany an-tsaha ny ray aman-drenin’izy ireo tamin’ny fotoana nampiady azy roalahy. Niantso miaramila mba hanasaraka azy roalahy rafitra ady ny anabavin’izy ireo, rehefa tsy nanahavita nanelanelana azy ireo.
Efa niato anefa ny adin’izy roalahy tamin’ny fotoana nahatongavan’ny miaramila. Naratra nandritra ny ady ny tanan’ilay zokiny tamin’izy roalahy.
Nokarohin’ireo miaramila ilay zandriolona voatondro ho nandratra. Tampoka teo, feom-basy no heno ka nanaitra ny olona, ilay tovolahy efa nitsirara no hita; maty tsy tra-drano.
samedi, 20 juin 2020 19:27
Betroka: Novonoina ilay mpamily dia natsipy teny amin’ny lalam-pirenena faha-13
Nahatsikarika gony nisy nanary avy ao anaty kamiao miloko fotsy, teo amin'ny tanàna atao hoe Bemelo, amin'ny lalam-pirenena faha-13, Kaominina Ianambinda, Distrika Betroka, 45 km tsy hiditra an’i Betroka avy Isoanala ny Fokonolona omaly, ka nampandre avy hatrany ny Zandary ao Betroka. Faty mihoson-dra no tao anaty gony rehefa nozahana.
Natao ny fitadiavana ilay kamiao. Nametraka sakana ny Zandary ka hita teo amin’ny 3km tsy hiditra an'i Betroka ilay kamiao. Rehefa nojerena dia tsy tao intsony ny mpamily ary feno rà ny ao anatiny amin'ny seza anoloana. Roso tamin’ny fikarona izay nahavanon-doza ny Zandary, taorian’ny fizahana ila kamiao sy namindrana ao an-dakazerina Betroka rehefa nahazo fahazoan-dalana avy amin’ny Fampanoavana.
samedi, 20 juin 2020 18:47
Toamasina: Mihamaro ny sitrana, tsy mitondra intsony ny tsimok’aretina Covid-19
Mitohy hatrany anefa ny fanentanana amin’ny fifanomezan-tànana, satria maro ireo vahoaka marefo ka mila tohanana. Anisan’izany ny mpianatra ao amin’ny anjerimanontolo Campus Barikadimy.
Nahatsiaro manokana azy ireo ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny Minisiteran’ny Mponina, ka ny Fikambanana DIRECT AID, ampian’ny Tsara sitrapo avy any KOWEIT no anisan’ny nanolotra « paniers garnis » 200 ho an’ireo mpianatra ireo. Natolotra omaly zoma 19 Jona tao amin’ny foiben’ny CRCO Atsinanana ireo fanampiana ireo. Nanatrika izany ny akipan’ny Minisiteran’ny Mponina notarihin’Andriamatoa Talen’ny Kabinetra, ary nisolo tena nandray izany ny CRCO, ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, ny Préfet, ny Be n'ny Tanàna ary ny Talen’ny Kabinetran’ny Oniversiten’i Toamasina.
Nitondra ny fankasitrahana ho an'ny DIRECT AID ny fitondram-panjakana.
Mpianatra manodidina ny 1 500 moa no kinendry hisitraka izao fanampiana izao. Andrasana ny fahatongavan’ny fanampiana sasany vao hozaraina miaraka izany.
Ambatondrazaka: Mpivarotra mpitety tsena nisy nanafika, voaroba ny 3 290 000 Ariary
Efa-dahy, mpivarotra mpitety tsena avy ao Antanambehivavy nandeha maraina ho any Ambatosoratra no nisy nanakana teny an-dalana, teo anelanelan’Ambohimandroso sy Ambatondrazaka. Fito lahy no nanafika azy ireo. Voaroba tamin’izany ny 3 290 000 Ariary, hatao « versement » sady hakana entam-barotra.
samedi, 20 juin 2020 18:14
samedi, 20 juin 2020 17:58
20 juin: Journée internationale du surf